Kdenlive inounza yakagadziridzwa vhezheni kune macOS | Linux Vakapindwa muropa
Mavhiki mashoma apfuura ini ndaifanira kuve chikamu chechikwata chaifanira kugadzirisa vhidhiyo yechiitiko. Pakusarudza chirongwa, icho chaifanirwa kunge chiri chemahara uye kana chiri mune inotakurika vhezheni (isina kuiswa) zvirinani, ini ndakakurudzira Kdenlive. Iyo inoshanda sisitimu iyo yaizogadziriswa yaizove Windows, uye pakupedzisira zvese zvakafamba zvakanaka. Zvakafamba mushe nekuti ini ndaitozviziva uye ndaiziva maitiro ekuita zvinhu zvakawanda nazvo, asi zvinhu zvaisazove zvakafanana kana mashandiro ekushandisa maishandira anga akasiyana neWindows kana Linux.
Apple inogadzira zvishandiso uye inogadzira software yakanaka kwazvo, zvinhu sezvazviri. Yayo iMovie inogona kushandiswa kugadzira mavhidhiyo akanaka nekukurumidza, asi dambudziko riri pachena: kana ukasashandisa macOS, haugone kushanda neMovie. Iko kune yakanyanya kupfupiswa vhezheni yeiyo iPadOS uye iOS, asi Apple chishandiso chinogara chichifanira. Kdenlive yaive yawanikwa yeMac kwenguva yakareba, asi kana tikaenda kune webhusaiti yayo zvaizotiudza kuti taifanira kutsvaga hupenyu hwedu toshandisa v0.9.10 kuburikidza neMacPorts. Kusvika nhasi.
Kdenlive inotangisa yekutanga vhezheni ye macOS mushure mekushandurwa kwezita rehurongwa hwekushandisa
Kdenlive neyemuno macOS theme
Julius Künzel anopa zano kuti zvinhu zvingasafambe pamwe chete nepandakaita vhidhiyo muWindows. Kdenlive ndeye yakaoma chirongwa uye ine zvakawanda zvinoenderana, saka zvinotora yakawanda yekuyedza uye nguva yekuti zvese zvishande zvakakwana paMacOS. Chii vaparura nhasi Iyo yakanzi "Husiku", iyo inofanirwa kutorwa seAlpha vhezheni, kana zvirinani ive pachena kuti haisati yasvika Beta. Ehe iri chimwe chinhu chakanyanya kuvandudzwa.
Kana chiri chimiro chazvino kana kugadzikana kweiyi vhezheni yeKdenlive ye macOS, pane zvishoma zvandingataure. Ndine iMac yakare yandinotadza kushandisa zvakare, haina kugashira masisitimu ehurongwa kwemakore uye zviri pamusoro pekuti haigone kuiswa, asi ndinofara kufunga kuti Kdenlive yatove multiplatform. Kana ndikambova neimwe Mac kana kushanda pa macOS ini ndinokwanisa kushandisa imwecheteyo vhidhiyo mupepeti yandinoshandisa paLinux uye yandakashandisa paWindows. Chero ani anofarira kuyedza anogona kurodha pasi iyo DMG faira kubva Iyi link.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Multimedia » Kdenlive inounza yakagadziridzwa vhezheni kune macOS. Iyo KDE mupepeti ikozvino yambuka-chikuva